Ny tombony azo amin'ny fampiasana tambajotra haino aman-jery maneran-tany ho an'ny fanatanjahantena tena manankarena - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ny tombony azo amin'ny fampiasana tambajotra haino aman-jery manerantany ho an'ny fanatanjahantena mivantana manara-penitra
Ny tombony azo amin'ny fampiasana tambajotra haino aman-jery manerantany ho an'ny fanatanjahantena mivantana manara-penitra
Miaraka amin'ny tsena ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena mivantana maneran-tany dia lasa zava-dehibe kokoa ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka amina mari-pahaizana.
Na dia zava-dehibe eran'izao tontolo izao aza ny hetsika fanatanjahan-tena lehibe ao amin'ny kalandrie, dia mitaky fangatahana manerantany amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny portfolio sporting. Afaka mamorona mpihaino lavitra lavitra ny faritany misy azy ny liga sy fikambanana, mampifandray amin'ireo mpankafy any ivelany amin'ny lafiny iray ary manangana mpihaino vaovao amin'ny lafiny iray. Avy amin'ny halehiben'ny lobaka baolina kitra eran-tany manerana an'i Azia ka hatrany amin'ny lazan'ny mpankafy ny fitsikerana any Etazonia, ny fanatanjahantena dia toe-java-misy maneran-tany izay mahatratra mihoatra ny tsingerin'ny fifaninanana sy lalao lehibe.
Mampifandray fanatanjahantena amin'ny mpihaino
Ny fandefasana votoaty avy any Etazonia fotsiny dia mitaky ny 20% amin'ny tsena manerantany, ary ny fampifandraisana izay omen'ny Telstra ho any Azia sy eran'izao tontolo izao dia manome votoaty fanatanjahantena sy fialamboly ho an'ireo mpihaino manerantany. Ny Telstra Global Media Network (GMN), miaraka amin'ireo tambajotra mpiara-miombon'antoka aminay, dia mahatratra mihoatra ny teboka 300 any Etazonia. Manolotra fahazoana mivezivezy avo lenta sy fahazoana antoka izy io, hihaona amin'ny kalitaon'ny serivisy fidirana sy ny fifandraisana ilaina amin'ny atiny horonantsary mivantana manankarena. Ny làlan-tariby tariby trans-pacific valo mampifandray an'i Etazonia amin'ny tsena iraisam-pirenena lehibe manerana ny faritra Azia-Pasifika ary manolotra 20TB fahaiza-manao tariby ao anatiny sy ivelan'ny firenena.
Ny tsenan'i Etazonia sy ny tanjantsika any Azia na dia ampahany amin'ny sary ihany aza. Ny Telstra dia manolotra tamba-jotra maneran-tany maneran-tany amin'ny 250,000 kilaometatra maro, miaraka amin'ny teboka 2,000 mihoatra ny firenena 200 manerantany. Izahay koa dia manolotra fifandraisana amin'ny 58 data afovoany eran-tany miaraka amin'ny iray amin'ireo dian-tongotra ivon-toerana miohatra indrindra amin'ny faritra Azia-Pasifika. Ny Telstra GMN Partner Alliance dia manolotra fidirana fanampiny amin'ny teboka farany amin'ny 2,500, ao anatin'izany ny mpanjifan'ny fanatanjahantena sy ny 1,000, ny toeram-panatanjahantena avo lenta 1,500, ary ny telonôlatera manerantany 10.
Izany dia ahafahantsika mamolavola vahaolana amin'ny tambajotra media amin'ireo fepetra takiana indrindra, ho an'ny mpitarika ny marika fanatanjahantena sy orinasa. Niara-niasa tamin'ny WTA Media izahay mba hamolavola tambajotra tokana eran-tany mahavita mandefa horonantsary avy amin'ny toerana misy ny WTA Tour's 47-plus manerana izao tontolo izao. Tafiditra ao anatin'izany ny fifandraisana mifangaro "roa sy isan-karazany" natao ho an'ny haino aman-jery mivantana, miaraka amin'ny famerenam-bidy ary misy lalana roa samihafa mankany amin'ny habaka WTA Media ho an'ny scalability sy ny fitsanganana. Ny lakilen'ny fahombiazana dia ny fahafahan'ny fibre mivezivezy, izay ahafahan'ny WTA Media manarona hetsika marobe, mitarika ny fanitarana ny votoaty avy amin'ny lalao 700 isan-taona ka mihoatra ny lalao 2,500 amin'ny vanim-potoana iray.
Mampivelatra ny fanavaozana
Fantatsika ny fiasan'ny fampitana fanatanjahantena. Avy amin'ny fanaterana fomba tsara kokoa hitaterana ny votoaty amin'ny zoro tsy manam-paharoa amin'ny hetsika lehibe maneran-tany amin'ny fampiasana Globecam, ny fanaraha-maso ireo hetsika mivantana avy amin'ny toerantsika ny Telstra Broadcast Operations Center, na ny fizarana atiny any Azia sy ny mihoatra, ny fahalalantsika amin'ny fanatanjahantena dia manome fanavaozana miaraka amin'ny mpanjifantsika. ao Aostralia sy manerana izao tontolo izao.
Tsy vitan'ny hoe manome ny vidin'ny horonantsary avo lenta, ambany-latency ho an'ny mpamaky sy ny mpijery ny haben'ny tambajotra Telstra, fa mpanampy lehibe ao amin'ny pivot mankany amin'ny famokarana ao an-trano koa izany. Avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Fox Sports Australia sy ny NEP Australia mba hanamboarana tambajotram-pamokarana miparitaka manerana an'i Aostralia ho an'ny famokarana lavitra ny votoatin'ny fanatanjahantena Tier One avy amin'ny NEP Andrews Hubs any Sydney sy Melbourne, mankany amin'ny sisintany Trans-Pasifik nahomby voalohany. famokarana any 2018 anelanelan'i Sydney sy Los Angeles, dia lasa zatra vaovao izany. Vao haingana indrindra, ny DPN dia nitondra 30 HD fakan-tsary mivantana sy fakan-tsary mivantana avy amin'ny Tompondaka World Relay Championship tany Japon, 8,000 km avy ao amin'ny Stadium Nissan ao Yokohama via Tokyo mankany amin'ny habaka famokarana NEP Andrews any Sydney.
Ny fahaizana manararaotra ny hery sy ny fahafahan'ny tambajotra Telstra dia mamela antsika hanao fanavaozana amin'ny sehatra mahaliana ho an'ireo mpampita fanatanjahantena. Ny kitapotsika fakantsary mini Globecam, ohatra, dia namboarina hisintonana ny hetsika ara-panatanjahantena avo lenta amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ary hanome traikefa jerena lalina. Ny kitapo dia maivana, matevina ary ampiasao ny teknolojian'ny rohy nomerika ambany latabatra mba hahazoana sy mamindra ny votoaty mivantana avy amin'ny sehatra sy ny fitsarana, na alefa toy ny RefCam, NetCam, UmpireCam, na HelmetCam, miankina amin'ny fanatanjahantena. Globecam dia omena ho toy ny serivisy mitantana ary azo atao mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny tsirairay amin'ny fanatanjahantena, mpikarakara hetsika ary mpamoaka lahatsoratra.
Ny antoka omena ny serivisy
Na amin'ny fampiasana maharitra na tsindraindray, ny haben'ny haben'ny Telstra Global Media Network miaraka amin'ny mpiara-miasa dia midika fa manana ny fahafahantsika mamoaka ny votoatinao amin'ny kalitao serivisy antoka ianao sy amin'ny fotoana ilaina. Manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny fampitana ny votoaty ao anatiny sy any Azia - tokoa, manana tambajotra tariby subsea lehibe indrindra any amin'ny faritr'i Azia-Pasifika izahay, mitondra ny 30% amin'ny fifamoivoizana amin'ny Internet ao amin'ny faritra ary manolotra fidirana amin'ny fividianana jiro intra-Azia indrindra. - ary ny fiaraha-miasa ataontsika any an-toeran-kafa dia manome antoka isika fa manome vahaolana tena izy manerantany.
Ny fahaizan'ny tambajotranay dia vahaolana tsara indrindra ahafahana mameno ny fangatahana mitaky ny votoatin'ny High High Definition avy amin'ny tsenan'ny fanatanjahantena, raha manome ny fifandraisana matanjaka sy fifandraisana ambany indrindra izay mitaky ny famokarana any an-trano. Mamela ny fifandraisana mivantana amin'ireo haino aman-jery lehibe sy ny toerana lehibe manerana izao tontolo izao, raha ny foibe fandefasana Broadcast manerantany sy efitrano fanampiny fanaraha-maso fanampiny any Azia, Etazonia, ary Eropa dia miantoka fa ny votoaty rehetra dia arahi-maso sy tantanana mandritra ny famantaranandro.
Fanatanjahantena izao tontolo izao. Mba hahatratrarana ireo mpihaino mitombo ary hahatanteraka ny fangatahana fitomboana mivantana ho an'ireo mpankafy manerana an'izao tontolo izao, ny takiana dia serivisy manakatra, bande bande ary fahatoniana omen'ny Telstra Global Media Network.
Mpanoratra: Anna Lockwood, Lehiben'ny Global Sales, Telstra Broadcast Services - IBC Stand number (raha ilaina): Hall 14.F18
California Streamin ' - Desambra 3, 2019
Fandinihana ny IBC2019 - Oktobra 5, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC Video injeniera	2019-08-19
Previous: Fandosirana amin'ny alàlan'ny fantsom-barotra Blackmagic Design Live Captures Festival Beauregard
Next: Ao anatin'ny vanim-potoana 4 ao amin'ny "Veronica Mars" (Article 2 an'ny 2)
NewTek TriCaster® Mini Video Production System dia manome ny famokarana sy fidirana amin'ny haino aman-jery UHD